Tsvaga Karma editorials
Vol. 8 No. 6 VII. Karma yemweya.
Vol. 9 No. 1 VIII. Karma yemweya.
Pamusoro pe karma iyi yevanhu vanhu vane unhu husina kujeka kana manzwiro enyama uye nekuda kwayo vanotya kutsamwa kwaMwari uye vanokumbira tsitsi.
Vol. 7 AUGUST, 1908. Nha. 5
KARMA ishoko iro kwezviuru zvemakore rakashandiswa nevaHindu. Karma inosanganisira pfungwa dzakaratidzwa nevamwe uye gare gare vanhu, mumashoko akadaro se kismet, ramangwana, kugadziriswa, kugadziriswa, kupa, kusagadziriswa, kuguma, hupfumi, kurangwa, nemubairo. Karma inosanganisira zvose zvinoratidzirwa nemashoko aya, asi zvinoreva zvakawanda kupfuura zvese kana zvose. Izwi rokuti karma rakashandiswa nenzira yakakura uye yakanyatsorongeka nevamwe vevaya vakaonekwa pakutanga pane ivo vari veboka rimwe chete iro rava kushandiswa ikozvino. Pasina kunzwisisa kwezvinoreva zvikamu zvaro uye kuti zvikamu izvi zvakasanganiswa zvakafanirwa kujekesa, izwi rokuti karma haringambogadziriswa. Kushandiswa kwaakaiswa mumakore aya ekupedzisira hakuna kuve muine pfungwa yakakwana, asi pane zvishoma uye zvinongororerwa kumanzwi emashoko akadaro sepamusoro ataurwa.
Kwemazana emakore mazana maviri masayendisiti eEastental ave achiziva izwi iri, asi kwete kusvika kusvika kwaMadame Blavatsky uye kuburikidza neTheosophik Society, iyo yaakagadzira, ine shoko uye dzidziso ye karma inozivikanwa uye inogamuchirwa nevakawanda kuMadokero. Izwi rokuti karma uye dzidziso iyo inodzidzisa ikozvino inowanika mune mabhuku akawanda emazuva ano uye inowanikwa muChirungu. Mhedziso ye karma inoratidzwa uye inonzwa mumabhuku anhasi.
Theosophists vakatsanangura karma sechikonzero nemigumisiro; mubairo kana kurangwa semigumisiro yemafungiro nemaitiro; murairo wekubhadhara; mutemo wekuenzanisa, wekuenzanisa nekururamisira; mutemo wekodzero causation, uye zvekuita nekuita. Zvose izvi zvinonzwisiswa pasi peshoko rimwechete rokuti karma. Icho chinoreva chirevo chezwi sezvinoratidzwa neshoko rezwi iro pachako rinotungamirirwa nemumwe wezvinotsanangurwa zviri mberi, izvo zvinoshandurwa nekushandiswa kweiyo pfungwa uye nheyo iyo izwi karma rakagadzirwa. Kana imwe pfungwa iyi ichinyorwa, zvinoreva izwi zvinoratidzika uye kunaka kwehuwandu hunoonekwa mukubatanidzwa kwezvikamu zvinoumba karma izwi.
Karma inoumbwa nemaSanskrit maviri midzi, ka na ma, iyo yakabatanidzwa pamwe chete netsamba R. K, kana ka, inobva kune rimwe boka remvura, iro ndiro rokutanga mune zvinyorwa zvishanu zvinyorwa zveSanskrit. Mukushanduka kwemashoko, KA ndiye wokutanga. Ndiro ruzha rwekutanga runopfuura huroti. Icho chimwe chezvimiridzo zveBrahmâ semusiki, uye zvinomiririrwa naMwari Kama, uyo anofanana neRoma Cupid, mwari werudo, uye kune chiGiriki Eros mukushanda kwavo kunonzwisisika. Pakati pemitemo iyo iri iyo, mutemo we chido.
M, kana ma, ndiyo tsamba yekupedzisira mumapoka e-labials, iyo ndiyo yechishanu mumagumo mashanu. M, kana ma, inoshandiswa seyo nhamba uye chiyero chechishanu, semudzi we manas uye inofanana neGreek we. Icho chiratidzo cheyogove, uye senheyo ndiyo manas, the pfungwa.
R ndeyomumakumbo, iyo iri boka rechitatu mune zvinyorwa zvishanu zveSanskrit. R ine runyararo ruchienderera mberi Rrr, rakagadzirwa nekuisa rurimi kurwenga rwemuromo. R zvinoreva chiito.
Izwi rokuti karma, saka, rinoreva chido uye pfungwa in chiito, kana, chiito nekubatana kwechido uye pfungwa. Saka pane zvinhu zvitatu kana mazano mu karma: chido, pfungwa uye chiito. Kutaura kwakakodzera ndiko karma. Izwi dzimwe nguva rinoshandurwa krm, kana kurm. Kutaura kusina kunyatsojekesa pfungwa ye karma, nokuti karma inobatanidza chiito (r) ye ka (kuda), chido, uye (ma), pfungwa, asi krm kana kurm yakavharwa, kana karma inodzinga, uye hairevi chiito, mutemo mukuru unobatanidzwa. Kana iyo consonant ka yakavharwa i k uye haigoni kunzwikwa; r inogona kunzwika, uye kana ikatevedzwa nevevha yakavharwa ma, iyo inobva yava m, hapana mazwi akabudiswa uye naizvozvo hapana kutaura kwechirevo che karma, nokuti chiito chacho chakavharwa uye chakabviswa. Kuti karma iite zvakakwana zvinoreva kuti inofanira kunge ine ruzha rusununguko.
Karma ndiwo mutemo wekuita uye unowedzera kubva muhomwe yejecha kusvika kune yose inoratidzika pasi munharaunda uye kuzvisimudza pachayo. Uyu mutemo uripo kwose kwose, uye hapana panze kunze kwemiganhu yemafungiro akaputika pane nzvimbo yekutaura kwakadaro sepabhiri kana mukana. Mutemo unotonga kumusoro kwose kwose uye karma ndiwo mutemo wekuti mitemo yose inobatsira. Hakuchina kupotsa kubva kune imwechete kusvika kune mutemo wakakwana we karma.
Vamwe vanhu vanotenda kuti hapana mutemo wekutonga kwakakwana, nekuda kwezvimwe zviitiko zvavanotumidza kuti "ngozi" uye "mukana." Mashoko akadaro anogamuchirwa uye anoshandiswa nevaya vasinganzwisisi nheyo yekutonga kana kuona zvinetso zvekushanda kunze chemutemo mune zvayo kune chero ipi zvayo yakakosha. Mashoko aya anoshandiswa mukubatana nezvokwadi uye zviitiko zvehupenyu zvinoratidzika kunge zvinopesana kana zvisingawirirani nemutemo. Njodzi uye mukana zvinogona kumira sezviitiko zvakatsaurwa zvisati zvamboitika nezvikonzero zvakananga, uye izvo zvingadaro zvakaitika sezvavakaita kana nenzira ipi zvayo, kana izvo zvingave zvisina kumboitika zvachose, semvura inogumburwa, kana kuti mheni inotyisa kana isingarova imba. Kune uyo anonzwisisa karma, kuvapo kwechiitiko uye njodzi, kana kushandiswa kana mupfungwa yekuputsa mutemo kana sechinhu pasina chikonzero, hazvibviri. Zvose zvinowanikwa mukati mehupenyu hwedu uye izvo zvinoratidzika kuti zvinopesana nemitemo inowanzozivikanwa kana kuti isina chikonzero, zvinotsanangurwa maererano nemitemo-apo tambo dzekubatanidza dzinotarirwa kune dzakapfuura uye zvinokonzera.
Netsaona chimwe chinhu chinoitika mumutsara wezviitiko. Iyi njodzi inoratidzika sechinhu chakasiyana icho munhu asingagoni kuwirirana nezvimwe zviitiko zvinoumba denderedzwa yezviitiko. Anogona kukwanisa kuona zvimwe zvikonzero zvinotangira uye zvinokonzerwa ne "ngozi," asi sezvo asingakwanisi kuona kuti sei uye nei zvakaitika iye anoedza kuzvidavirira nokuda kwekutumidza iyo njodzi kana kuitaura nenzira yengozi. Izvo, kutanga kubva mumamiriro ehuchenjeri hwekare, chinangwa chake chinopa mutungamiri uye chinoita kuti afunge paanotarisana nedzimwe pfungwa kana mamiriro ehupenyu, chiito chinotevera chirevo chake uye chiito chinounza migumisiro, uye mhinduro dzinopedzisa denderedzwa yezviitiko iyo yakaumbwa ne: ruzivo, vavariro, pfungwa nezviito. Njodzi inowanikwa chikamu chechimwe chikamu chisingaoneki chezviitiko zvinowirirana uye izvo zvinofananidzwa nemigumisiro kana kuitika kwechikwata chekare chezviitiko, nokuti denderedzwa rimwe nerimwe rezviitiko hazviperi pacharo, asi kutanga kweimwe denderedzwa zvezviitiko. Nokudaro upenyu hwehupenyu hwese hwakaumbwa neketani refu yekutenderera yezvisingagoni kuverengwa zvezviitiko. Netsaona-kana chero kuitika, nokuda kwechikonzero cheiyo-ndiyo imwe chete yemigumisiro yezviito kubva paketani yezviitiko uye tinozvitumidza kuti njodzi nokuti yakangoerekana yaitika kana kuti isina chinangwa chezvino, uye nokuti hatina kuona zvimwe zviitiko izvo yakatangira iyo sechikonzero. Chance ndiko kusarudzwa kwechiito kubva kune zvakasiyana-siyana zvinopinda muchiito. Zvose zvinokonzerwa nezivo yega, chinangwa, kufunga, chido uye chiito-iyo karma yake.
Somuenzaniso, varume vaviri vari kufamba vachifamba mumatsetse emvura. Nokuisa rutsoka rwake pane dombo risina kuchengeteka mumwe wavo anorasikirwa netsoka dzake uye inopinda mumupata. Shamwari yake, ichienda kununura, inowana mutumbi pasi, unomira, pakati pematombo anoratidza streak yeawa yegoridhe. Rufu rwomumwe runoparadza mhuri yake uye runokonzera kukanganisa kune avo vaanoshamwaridzana naye mubhizinesi, asi nokuwa kumwechete kune mumwe anowana mgodi wegoridhe iyo ndiyo inobva pfuma yake yekuunganidza. Zvakaitika zvakadaro zvinonzi yengozi, iyo yakaunza kushungurudzika uye urombo kumhuri yevakafa, kusakwanisa shamwari dzake mubhizinesi, uye akaunza ruzivo kune shamwari yake iyo upfumi hwakakonzerwa nemukana.
Maererano nemutemo we karma hapana ngozi kana mukana unobatana nezvakaitika zvakadaro. Chimwe nechimwe chezviitiko izvi zvinowirirana nekushanda kunze kwemurairo uye kunobatanidza nezvikonzero izvo zvakagadzirwa kunze kwepakati pemiganhu yekuona. Nokudaro, varume vasingakwanisi kutevera izvi zvinokonzera uye kugadziriswa uye kutakura kwemigumisiro yavo mukati mezvino uye mune ramangwana, vanoshevedza njodzi yavo yegumisiro uye mukana.
Kunyangwe hurombo uhwo hunofanira kumutsa kuzvidzora kune avo avo vainge vakavimbika kune wakafa uye vanobudisa ruzivo uye nheyo dzisingafaniri kuonekwa apo dzichivimba nomumwe; kana kuti, kune mhaka yakatarisana, avo vanovimba vanofanirwa kuora mwoyo uye kuvhiringidzika, kurega kuora mwoyo uye kuva varombo, zvinogona kuvimba zvakakwana pane zvakaitika kare kune avo vaifunganya; kana kuti mukana wepfuma unoshandiswa kuburikidza naiye akawana goridhe uye anovandudza mukana wepfuma kuti ave nani pane zvaanozviita iye nevamwe, kubvisa kutambura, kupa zvipatara, kana kutanga uye kutsigira basa rekudzidzisa nesayenzi tsvakurudzo yezvakanaka zvevanhu; kana kuti, kune rumwe rutivi, haaiti chinhu cheizvi, asi anoshandisa pfuma yake, uye simba uye simba iro rinomupa, nekuda kwekudzvinyirirwa kwevamwe; kana kuti iye anofanira kunge akazvidzivirira, achikurudzira vamwe kune hupenyu hwekudzivisa, kuunza kunyadziswa, kushungurudzika uye kuparadza iye pachake nevamwe, izvi zvose zvingave zviri maererano nemitemo yekarma, iyo ingadai yave yakagadzirirwa nevose avo vane hanya.
Avo vanotaura nezvenguva uye pangozi, uye panguva imwechete vachitaura uye vanobvuma chinhu chakadai semutemo, vanozvicherechedza kubva mupfungwa kubva kunyika isina ruzivo rwezivo uye vanogadzirisa mafungiro avo kune zvinhu zvinoratidzira nyika inotyisa yezvinhu zvakakomba nyaya. Kuona asi zviitiko zvezvisikwa uye zviito zvevarume, hazvikwanisi kutevera izvo zvinobatanidza uye zvinokonzera kuitika kwezvakasikwa uye zviito zvevarume, nokuti izvo zvinobatanidza zvinokonzera zvinokonzera nemigumisiro nezvikonzero hazvigone kuonekwa. Kubatanidzwa kunoitwa uye munyika dzisingaonekwi, uye naizvozvo dzakaramba, neavo vanofunga kubva pane zvisikwa zvega. Kunyange zvakadaro, nyika idzi dziripo. Chiito chomunhu chinounza zvimwe zvimwe zvakaipa kana kuti chinobatsira chinogona kuonekwa, uye zvimwe zviitiko zvinotevera zvinotevera zvingave zvichitevedzwa, nemunhu anocherechedza uye anofungidzira uye kubva kune chokwadi muzvinhu zvenyama; asi nokuti haakwanisi kuona kuwirirana kwechiito ichocho nechinangwa chayo chinopesana, kufunga nekuita munguva yakapfuura (kunyange kure kure), anoedza kuverengera chiitiko kana chiitiko nokutaura kuti chaiva chikonzero kana ngozi. Hapana yemashoko aya anotsanangura zvinoitika; nemamwe emashoko aya anogona kugadziriswa kana kuti kutsanangura, kunyange maererano nemutemo kana mitemo yaanobvuma kuti inoshanda munyika.
Muchiitiko chevafambi vaviri, kana mutadzi aishandiswa mukusarudza nzira yake angadai asina kuwira, kunyange zvazvo kufa kwake, sezvazvaidiwa nemutemo we karma, kwaingova kwakasarudzwa. Kana shamwari yake isati yasvika nenzira inotyisa, netariro yekupa rubatsiro iye haaizowana nzira dzaakawana nayo pfuma yake. Asi, sezvo upfumi hwaizova wake, semugumisiro wemabasa ake akapfuura, kunyange kana kutya kuchiita kuti arambe kuburukira kunobatsira shamwari yake, angadai akangodaro kufambisa kubudirira kwake. Nokurega kurega kupfuudza mukana, basa iro rakaratidzwa, akakurumidza karma yake yakanaka.
Karma ndiwo mutemo unoshamisa, wakanaka uye unobatana unowanikwa munyika yose. Zvinoshamisa kana zvichitsanangurwa, uye izvo zvisingazivikanwi uye zvisingaverengeki zvezviitiko zvinoonekwa uye zvinotsanangurwa nekuenderera mberi kwechikonzero, kufunga, chiito, nemigumisiro, zvose maererano nemitemo. Izvo zvakanaka nokuti kubatana pakati pechinangwa nekufunga, kufunga uye chiito, chiito nemigumisiro, yakakwana muhuwandu hwavo. Izvi zvinowirirana nokuti zvikamu zvose uye zvikonzero mukushanda kunze kwemurairo, kunyange zvazvo kakawanda zvichionekwa zvichipikisana kana zvichionekwa zviri voga, zvinoitwa kuti zvizadzise mutemo kuburikidza nekugadzirisa kune umwe neumwe, uye pakugadzirisa ukama hwakabatana nemigumisiro vazhinji, pedo uye kure, zvakatarisana uye inharmonious zvikamu nezvikonzero.
Karma inogadzirisa zviito zvakasiyana-siyana zvemabhiriyoni evanhu avo vakafa uye vakararama uye vachafa uye voraramazve. Kunyange achivimba uye akazvimiririra kune vamwe vemhando yake, munhu wese "ishe we karma." Isu tiri vatongi ve karma nokuti mumwe nomumwe ndiye mutongi wezvakaitika zvake.
Zvose zviitiko nezviito zvehupenyu zvinotungamirirwa neiye chaiye ini, munhu oga, kuhupenyu hunotevera, uye kune inotevera, uye kubva kune imwe nyika yehurongwa kusvika kune imwe, kusvikira kusvika pakupedzisira kwehutano hwasvika uye mutemo wepfungwa dzako nemabasa, mutemo we karma, wakagutsikana uye wakazadzika.
Kushanda kwekarma kwakavanzwa kubva mupfungwa dzevanhu nokuti pfungwa dzavo dzinotarisana nezvinhu zvinobatana nehupenyu hwavo nemanzwiro evarindiri. Aya mafungiro anogadzira rusvingo kuburikidza nekuratidzwa kwepfungwa hakukwanise kupfuurira kutsvaga izvo zvinobatanidza pfungwa, nemafungiro uye chido kubva kwainobva, uye kunzwisisa zviri kuitwa munyika yepanyika sezvavanozvarwa munyika yepanyika kubva pamafungiro uye kuchiva kwevanhu. Karma yakavanzwa kubva pamunhu, asi inonyatsozivikanwa kune mumwe nomumwe, izvo zvakasikwa ndiMwari unobva maari unhu uye hunofananidzira uye mumvuri.
Zvinyorwa zvekushanda kwe karma zvicharamba zvakachengetwa chero bedzi munhu achiramba kufunga nekuita zvakarurama. Apo munhu achangofunga nekuita nekururama uye asingatyi, pasinei nekurumbidza kana mhosva, ipapo iye achadzidza kuonga mutemo uye kutevera kushanda kwemutemo we karma. Iye achazosimbisa, kudzidzisa nekugadzirisa pfungwa dzake kuitira kuti irove rusvingo rwemangariro rwakapoteredza unhu hwake uye ave nekugona kutsvaga chiito chepfungwa dzake, kubva mumuviri kuburikidza ne astral uye kuburikidza nepfungwa yezvemweya uye kudzokera zvakare the physical; ipapo iye acharatidza karma kuti ave zvose zvinodanwa nokuda kwaavo vanoziva kuti chii.
Kuvapo kwe karma yevanhu uye yehupo hwehupo hwevanhu hunoziva, kunyange husingazive zvakakwana, ndiyo inobva kune izvo zvisinganzwisisiki, zvisikwa kana kuti mafungiro ekuti mutongi anotonga nyika. Izvi zvakasikwa mumunhu wese uye nekuda kwayo, munhu anotya "kutsamwa kwaMwari" uye anokumbira "tsitsi."
Hasha dzaMwari ndiko kuunganidza zviito zvisina kururama zvakaitwa nemaune kana kuti zvisingazivi izvo, saNe Nemesis, zvinotevera, zvakagadzirira kuitika; kana kusungirirwa semunondo weDhamocles, akagadzirira kuwira; kana sekunhira kwekutinhira gore, vakagadzirira kuzvirongedza nokukurumidza apo mamiriro acho akaorera uye mamiriro ezvinhu achabvumira. Iyi manzwiro e karma evanhu anogoverwa nhengo dzaro dzose, nhengo imwe neimwe yayo ine pfungwa zvakare yeNeesis yake uye yekutinhira gore, uye kunzwa uku kunoita kuti vanhu vaedze kudzikinura zvimwe zvisingaoneki.
Tsitsi dzinotsvakwa nemunhu ndeyekuti achaita kuti matongo ake echokwadi abve kana kuti achinonoke kwekanguva. Kubviswa hazvibviri, asi karma yezviito zvingave yakatorwa shure kwechinguva, kusvikira kushevedza ngoni kunokwanisa kusangana ne karma yake. Ngoni inobvunzwa neavo vanozviona sevasina simba kana kukundwa nekutya kukumbira kuti mutemo upedze kamwechete.
Kunze kwekunzwa kwe "kutsamwa" kana "kutsiva" kwaMwari uye chido che "ngoni," pane kutenda kwechizvarwa kana kutenda mumunhu kuti kune imwe nzvimbo munyika-zvisinei nezvose zvinoita sekusaruramisira zvinoratidzika mune zvese- hupenyu hwezuva-ikoko , kunyange zvisingaoneki uye kwete kunzwisisa, mutemo wekutonga. Ichi chitendero chetsika mukururamisira chinowanikwa mumweya wemunhu, asi chinoda imwe dambudziko umo munhu akandwa paari pachake seinoita sekusaruramisira kwevamwe kuti vataure. Unhu hwehutano hwekururamisira hunokonzerwa nehupenyu hwekusafa hunopfuurira mukati memwoyo wemunhu, pasinei nekusaziva kwake, kuda zvenyama uye mamiriro ezvinhu akaipa ayo aanosangana nawo.
Izwi rekusafa ndiro ruzivo rwakakosha kuti iye anokwanisa uye achararama kuburikidza nekuita sekusaruramisira kwaakaiswa pamusoro pake, uye kuti achararama kururamisa kukanganisa kwaakaita. Mhedziso yeruramisiro mumoyo wemunhu ndicho chinhu chimwe chinomuponesa kubva pakunamatira kunzwirwa nyasha nemwari ane hasha, uye kutambura kwenguva refu nechisungo chekusaziva, kukara, simba-anoda mupirisita. Iyi pfungwa yekururamisira inoita munhu wemunhu uye inomugonesa kutarisa asingatyi mune imwe chiso, kunyange zvazvo achiziva kuti anofanira kutambura nekuda kwekukanganisa kwake. Manzwiro aya, ekutsamwa kana kutsiva kwaMwari, chido chetsitsi, uye kutenda mune ruramisiro yekusingaperi yezvinhu, uchapupu hwekuvapo kwe karma yevanhu uye yekucherechedza kuti kunepo, kunyange zvazvo kubvuma dzimwe nguva asina kuziva kana kure.
Sezvo munhu anofunga uye achiita uye achirarama maererano nemafungiro ake, kuchinjwa kana kusimbiswa nemamiriro ezvinhu anowanikwa, uye semunhu, saizvozvo rudzi kana hupfumi hwakakura huri kukura uye hunoenderana maererano nemafungiro ayo uye zvinangwa uye zvinowanzoitika zvinotyisa, izvo ndiyo migumisiro yemafungiro akachengetwa nguva refu yapfuura, saizvozvowo unhu hwevanhu sehuse uye huri munyika iyo hwave uye hwave huri, huri kurarama uye hurikura kubva paudiki kusvika kune zvakanakisisa mupfungwa uye mune zvekunamata, maererano nemutemo uyu. Zvino, semunhu, kana rudzi, rudzi rwevanhu vose, kana kuti iyo yose iyo nhengo dzomunhu dzisina kusvika pakuguma kwakakwana izvo ndicho chinangwa chekuratidzwa kwakadaro kwenyika kusvika, kufa. Unhu nezvose zvinosangana nehupenyu zvinopfuurira uye maitiro emamiriro ezvinhu anononoka anogumira kuvapo, asi chinangwa chepasi chinoramba chiripo, uye humwe huri hupenyu sehupenyu huripo, uye vose vanopinda mumamiriro ezvinhu ezororo akafanana neaya mumunhu inopfuura apo, mushure mekuedza kwezuva, anoisa mutumbi wake kuti uzorore uye upfure muhurumende iyo inoshamisa kana nyika iyo vanhu vanonzi kurara. Kune munhu anouya, mushure mokurara, kumutswa kunomutumira kune mabasa ezuva racho, kutarisira nekugadzirira muviri wake kuti aite mabasa ezuva iro, izvo zvinokonzerwa nemafungiro ake nezviito zvezuva rakapfuura kana mazuva. Kufanana nemunhu, zvose zvakasikwa nezvisikwa zvayo uye varume vanomutsa kubva panguva yaro yehope kana kuti zororo; asi, kusiyana nemunhu anogara zuva nezuva, haana muviri wenyama kana miviri umo inonzwisisa zviito zvepfuura yapfuura. Inofanira kudana nyika uye miviri kuburikidza nazvo.
Izvo zvinorarama mushure mekufa kwemunhu mabasa ake, semufananidzo wemafungiro ake. Nhamba yose yemafungiro nemafungiro ehupenyu hwevanhu ndeye karma inogara, inomutsa nekudanidzira zvinhu zvose zvisingaonekwi mubasa rinooneka.
Nyika imwe neimwe kana ruzhinji rwehupenyu hunovapo, uye miviri nemitumbi inogadzirwa maererano nemutemo, mutemo unotsanangurwa nehumwe humwe hwevanhu hwakanga hwavapo munyika kana nyika dzakatangira huratidziro hutsva. Uyu ndiwo mutemo wekururamisira kusingagumi umo vanhu vose sevanhu vose, uyewo mumwe nomumwe unhu humwe, hunofanirwa kufara nezvibereko zvekushanda kwekare uye kutambura nemigumisiro yezviito zvisina kunaka, sezvakataurwa nemafungiro nemaitiro akapfuura, izvo zvinoita mutemo wemamiriro ezvinhu ikozvino. Chimwe nechimwe chevanhu chinotarisa karma yake uye, sechibatanidzwa pamwe chete nedzimwe nhengo, inobata uye inoita mutemo umo vanhu vose vari kutungamirirwa.
Pakupera kweimwe nguva huru yekuratidzwa kwehurongwa hwepasi, chikwata chimwe nechimwe chevanhu chinopfuurira kusvika pakupedzisira kwekukwana izvo zvinangwa zvekushanduka-shanduka, asi zvimwe zvikamu zvisati zvasvika pakakwana, uye saka kupinda muhomwe iyo yezororo inopindirana nezvatinoziva sehope. Pakudzoka kwezuva idzva rehurongwa hwenyika imwe neimwe yezvikamu inomutsa panguva yake yakakodzera uye mamiriro ezvinhu uye inoenderera mberi nezvakaitika uye basa iro rakasara kune zuva rakapfuura kana nyika.
Musiyano pakati pekumuka kweumwe munhu wega kubva zuva nezuva, hupenyu hupenyu, kana kubva kuhurongwa hwenyika kusvika kunyika yehurumende, mutsauko munguva chete; asi hapana misiyano mumutemo wekuita kwemurairo we karma. Miviri mitsva nehupenyu hunofanira kuvakwa kubva munyika yose kune dzimwe nyika senguvo senguo dzakasungwa nemuviri zuva rimwe nerimwe. Misiyano iri mumasikirwo emitumbi uye yezvokupfeka, asi munhu mumwechete kana ini ndinoramba ndiri zvimwechetezvo. Mutemo unoda kuti chipfeko chinoiswa pazuva chive icho chakakonzerwa uye chakarongerwa kune rimwe zuva rakapfuura. Uyo akaisarudza, akaitaurira uye akaronga mamiriro ezvinhu uye mamiriro ayo iyo inguvo inofanira kupfekwa, ndeye I, munhu oga, ndiani muiti wemutemo, umo iye anomanikidzwa nemuitiro wake kuti agamuchire icho izvo zvaakazvipa iye pachake.
Maererano neruzivo rwemafungiro nemaitiro ehuunhu, iyo inofanirwa mukuyeukwa kwehupenyu, ego inoumba chirongwa ichi uye inogadza mutemo maererano nezvinofanira kuitwa nehupenyu hwemangwana. Sezvo pfungwa dzehupenyu huripo mukuyeuka kwe ego saka pfungwa uye zviito zvevanhu zvakakwana zvakachengetwa muchiyeuchidzo chevanhu. Sezvo pane pane ego chaiye iyo inoramba ichisvika mushure mekufa kwehuunhu saka kunewo ego yevanhu inopfuurira mushure mehupenyu kana nguva imwe yekuratidzwa kwevanhu. Iyi ego yevanhu ndeyevanhu vakawanda. Chimwe nechimwe chezvikamu zvayo zvakakosha kune iyo uye hapana inogona kubviswa kana kubviswa nokuti ego yevanhu ndeyeye uye isingaoneki, hapana chikamu chekugona kuparadzwa kana kurasikirwa. Mukurangarira kwehupenyu hwevanhu, pfungwa uye zviito zvezvikamu zvose zvevanhu zvakachengetwa, uye zviri maererano neshoko iri rekuti chirongwa chenyika itsva chetsika chinogadziriswa. Iyi ndiyo karma yevanhu vatsva.
Kuziva kunopararira munyika yose kusvikira ruzivo rwakakwana uye rwakakwana rukawanikwa. Chivi uye kusaziva chiito zvakasiyana pane. Sezvo, somuenzaniso, munhu anogona kutadza, kana kuita zvisina zivo, nekunwa kubva mudziva rinotapukirwa nefivha, kuisa mvura kune shamwari inonwawo zvakare, uye vose vari vaviri vanotambura hupenyu hwavo huri sechikonzero chekusaziva kwakadaro; kana mumwe anogona kuronga uye achiba nemaune mari yakawanda kubva kune varombo varimi; kana imwe inogona kusika hondo, kuponda, kuparadza maguta uye kupararira dongo pamusoro penyika yose; pane imwe nguva inogona kukurudzira vanhu kuti vatende kuti ave mumiririri waMwari uye Mwari asina muviri, kuburikidza nekutenda kwaanoita kuti vaite chikonzero chekuzvidzivirira, vanozvipira kune zvakanyanya uye vanotevedzera tsika dzakadaro dzichaita kuti vakuvadze mutsika uye mumweya. Chivi, sechiito chisingazivi, chinoshanda kune imwe neimwe mhosho, asi chirango icho chiri migumisiro yechiito chacho chinopesana maererano nechiyero chekusaziva. Mumwe ane ruzivo rwemitemo yevanhu inotungamirira vanhu uye anoshandisa zivo yake kukuvadza vamwe, acharwadziwa zvikuru uye kwenguva yakareba nokuti ruzivo rwake rwunoita kuti ave nemhosva, uye chivi, chiito chisina kururama, chikuru kana kusaziva kwake kwakaderera.
Saka imwe yezvivi zvakanyanya, kune uyo anoziva kana kuti anofanira kuziva, ndeyokuzvida nemaune mumwe wemumwe wake kodzero yekuzvisarudzira, kumuderedza kuburikidza nokuvanza kubva kwaari mutemo weruramisiro, kumunyengetedza kurega kuda kwake, kuti anokurudzira kana kuti aite kuti avimbe kana kukanganwira, simba remweya, kana kusafa pane mumwe, pane kuvimba nemutemo wekutonga nemigumisiro yebasa rake.
Chivi ndicho chisina kururama, kana kukaramba kuita zvakanaka; zvose zviri zviviri zvinoteverwa nehupenyu hwekutya kwemutemo wakarurama. Nyaya yechivi chepakutanga haisi nhema; iyo fable inovanza, asi inotaurira, ichokwadi. Izvo zvine chokuita nekuberekwa uye kuberekwa patsva kwevanhu vekutanga. Chivi chepakutanga chakanga chiri kuramba kweimwe yezvikamu zvitatu zvevana ve Universal Mind, kana kuti Mwari, kuti vadzoke zvakare, kutora muchinjikwa wenyama uye vauye nemutemo kuitira kuti mamwe madzinza awane mukana wavo. Kuramba uku kwaipesana nemutemo, karma yavo yenguva yapfuura yekuratidzwa iyo yavakanga vatora chikamu mukati. Kuramba kwavo kubvazve patsva pakasvika nguva yavo, vakabvumira vashoma kufamba mberi masangano kupinda mumitumbi yakagadzirirwa ivo uye izvo zviduku zvakaderera zvaisakwanisa kuti ushandise zvakanaka. Nokusaziva, masangano ezasi akabatanidzwa nemhando dzemhuka. Izvi, kushandisa zvisina kunaka chiito chekubereka, chaiva "chivi chepakutanga," mupfungwa. Mugumisiro wezviito zvekubereka zvisiri pamutemo zvehupenyu hwepasi ndekupa kuvanhu ruzivo rwekuita vana vasingabvumirwi nemutemo-izvo zvinounza chivi, kusavhiringidza, kuita zvakaipa uye rufu, munyika.
Apo pfungwa dzikaona kuti miviri yavo yakanga yatorwa nemadzinza maduku, kana masangano akaderera pasi pevanhu, nokuti vakanga vasina kushandisa miviri, vaiziva kuti vose vakange vatadza, vakaita zvisakarurama; asi apo madzinza apasi akanga aita zvisingazivi ivo, pfungwa, vakange varamba kuita basa ravo, saka ivo ivo zvivi zvakakura nekuda kwekuziva kwekukanganisa kwavo. Saka pfungwa dzinokurumidzira kuti dzive nemitumbi yavakanga varamba, asi dzakawana kuti dzave dzakatongerwa uye dzichitungamirirwa nekuchiva kusina mutemo. Chirevo chechivi chepakutanga cheMwanakomana we Universal Mind uyo aisazoberekwazve uye kubereka ndeyekuti iye zvino anotungamirirwa neavo vakaramba kutonga. Apo vaigona kutonga vaisazoita, uye ikozvino kuti ivo vachatonga havagone.
Icho chiratidzo chechivi chekare chekare chiripo nemunhu wose mukutambudzika nekurwadziwa kwepfungwa zvinotevera chiito chekuchiva icho chaanotungamirirwa, kunyange nechikonzero chake, kuzviita.
Karma haisi mutemo usina ruzivo, kunyange karma inogona kuumbwa zvisinganzwisisiki neanoita zvisingazivi. Kunyange zvakadaro, chibereko chechiito chake, kana karma, chinotarisirwa neuchenjeri chisina kufarira kana kusarura. Kushanda kwekarma kunogadzirisa chete. Kunyange zvazvo asingawanzozivi nezvechokwadi, munhu wese uye zvisikwa zvose uye mazano mukati mezvose ane rimwe nerimwe raakagadzirirwa basa rokuita, uye umwe neumwe chikamu mumutambo mukuru wekushanda kunze kwemurairo we karma. Mumwe nomumwe ane nzvimbo yake, pasinei nekwakagadzika kwekodwheel, pini, kana kuti chiyero. Izvi ndizvo zvingave kana iye kana angave achiziva kana asingazivi zvechokwadi. Asi zvisinei zvisina basa chikamu chimwe chinogona kutaridzika kutamba, zvisinei, paanoita anotanga mishonga yose ye karma inoshanda inosanganisira zvimwe zvikamu zvose.
Nokudaro sezvo mumwe anoita zvakanaka chikamu chaanofanira kuzadza, saka anozoziva kushanda kwemutemo; ipapo anotora chikamu chinokosha. Kana akaratidzwa kuti akarurama, achizvisunungura pamigumisiro yezvaanofunga uye zviito zvake, anokodzera kugadzirirwa kutungamirirwa kwekarma yenyika, dzinza, kana nyika.
Pano pane mazano anoshanda sevakuru vakuru vemutemo we karma mune zvaanoita kuburikidza nenyika. Aya mazano ndeaya ehurumende dzakasiyana-siyana dzinonzi: lipika, maviri, cosmocratores uye vatumwa. Kunyange munzvimbo yavo yakakwirira, idzi mazano anoteerera mutemo nekuzviita. Izvo zvikamu mumichina ye karma; iyo inhengo muhutungamiri hwemurairo mukuru we karma, zvakafanana neye tiger anouraya uye achiparadza mwana, kana sechidhakwa chinononoka uye chinokanganisa chinoshanda kana kuponda kwe pittance. Misiyano ndeyekuti mumwe anoita zvisingazivi, asi, rimwe racho rinoshanda nekuchenjera uye nokuti rakarurama. Vose vari kunetseka mukuzadzikisa mutemo we karma, nokuti kune kubatana kuburikidza nezvose uye karma inodzivirira kubatana mubasa rayo risingaiti nguva dzose.
Isu tinogona kudana pamusoro pemafungiro aya makuru nemazita akadaro sezvatinofarira, asi vanotipindura isu bedzi patinenge tichiziva kuvadana navo uye zvino vanogona kungopindura chete kudanwa kwatinoziva kupa uye maererano nemamiriro ekudana . Havangarati nyasha kana kuvenga, kunyange kana tine ruzivo uye kodzero yekuvakumbira. Vanocherechedza uye vanoshevedza varume apo varume vanoda kuita zvakarurama, kusina udyire uye nokuda kwezvose. Apo varume vakadaro vakagadzirira, vakangwara vema karma vangada kubva kwavari kuti vashumire mune zvakakosha izvo pfungwa dzavo nebasa zvakagadzirisa ivo. Asi kana vanhu vakadanirwa nemafungiro makuru haisi pamwe nepfungwa yekufarirwa, kana chimwe chinhu chavanofarira ivo, kana nechinangwa chemubairo. Vanodanwa kuti vashandise mune imwe nzvimbo yakakura uye yakajeka yekuita nokuti ivo vanokwanisa uye nokuti ndizvo chete kuti vanofanira kuva vashandi vane mutemo. Iko hakuna manzwiro kana manzwiro mumasarudzo avo.
MuSeptember "Shoko" karma ichabatwa mukushandiswa kwaro kumweya.-Mup.